भबिस्यको कल्पना - दिपक चन्द - पिटि अनलाईन न्यूज
२ आश्विन, २०७८ १३:३५
✍समाजमा चेतना र समय दुवै गतिशील हुन्छन् । त्यो गतिलाई समात्नुपर्छ या समात्न सिकाउनु पर्छ, सर्व प्रथम त केवल राजनीतिले । त्यति मात्र होइन, कहिले काहीँ राजनीतिले समाजलाई अझ धेरै गतिशील ,उन्नत पनी बनाउनु पर्छ। तेसकारण भनिन्छ, ‘राजनीतिको चेतना र गति बेजोड हुनुपर्छ ।’ तर जब थाकेका नेताहरू राजनीतिमा बुर्कुसी मार्छन, तब के हुन्छ त ? समयभन्दा पछाडि हिँड्ने नेतृत्वको प्रयोजन हुँदैन । या त उनीहरूको उपादेयता सकिन्छ या विश्राम अनिवार्य बन्छ ।अन्यथा समाजले नेतृत्व गुमाउँछ । त्यसैले नै राजनीतिमा पुस्ता हस्तान्तरण एउटा स्वच्छ र गतिशील परिघटना हो। गतिशील बाटाहरु स्वाभाविक र स्वैच्छिक,हस्तक्षेप र दवाब अनी बृहत्तर ध्रुवीकरण पनी हुन तर यी सबैमा अहीलेका संत्ताधारी र पुराना आफुलाई समाजवादी भन्ने शक्तीहरु असफल भैसकेका पक्कै हुन। केही न भएपनी दुइटा बाटा पार्टीभित्रैबाट स्वचालित हुनुपर्छ । एउटा, पुराना नेताहरूले आफ्नो प्रयोजन सकिएको बोध गर्नु र नयाँ पुस्तालाई बाटो छोडिदिनु पुस्ता हस्तान्तरणको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो,के यो भैरहेको छ?? हृदयवाटै उत्तर पाउँन। दोस्रो जब यी कोठे शेरहरू यो प्रक्रियामा जान निरुत्साहित हुन्छन्, युवाहरुले चाकडी, चाप्लुसी गरेर बस्ने हैन, बाटो बद्लिदै हिड्ने हो चाहे पहिला तेही पार्टीमा हुन या अन्य पार्टीमा तर आफ्नो सकारात्मक बाटो चाही निरन्तर हुनै पर्छ। अन्यथा यो मायाजाले राजनितीमा नत बैकल्पिक भनेर उफ्रीएर राजनीति हुन्छ,न त गोरुगाडा चढेर चन्द्रमा पुगिन्छ, न त डोजरमा चढेर रेलको तिर्सना नै मेटाउन सकिन्छ, हैन र??
राष्ट्रिपति,प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु प्रत्यक्ष प्रणालीबाट चुनिनु पर्छ,ब्यालेट पेपरमा नो भोट थपिनु पर्छ। संसदहरु मन्त्री हुने प्रणाली हटाउनु पर्छ । निसुल्क शिक्षा,स्वास्थ्य र रोजगारीको सरकारले पुर्ण जीम्मेवारी लिनुपर्छ। राईट टु रिजेक्ट ,राईट टु रिकल प्रणाली हुनु पर्छ ।रोजगारीको लागी विदेशीएका युवाहरुले पनी बिदेशबाटै भोट हाल्न सक्ने प्रबिधिको बिकास गर्नु पर्छ ।
मन,मत र बाटो बदल्दै यहाँ पुगेका हौ।पुराना ऐतिहासिक प्रतेक परीवर्तन को हृदय देखी नै सम्मान गर्दै अझ यो भन्दा पनी राम्रो परिवर्तन गर्ने र हेर्ने हो भने सकारात्मकता तिर मन,मत र बाटो बदल्नु नै पर्छ भन्ने लागी रहेको छ।